चतुर स्यालको बुद्धि - शखदा साहित्य
चतुर स्यालको बुद्धि
11:32 AM बालकथा, बालसाहित्य
एकादेशमा धूर्त नाम गरेको स्याल थियो । त्यो स्याल रानीवनको जङ्गलमा बस्थ्यो । त्यहाँ सिंह, हात्ती, बाघ, भालु बस्दथे । त्यो जङ्गलको राजा सिंह थियो भने महामन्त्री त्यही धूर्त स्याल थियो । महामन्त्री धूर्त स्यालको कपट र स्वार्थले सिंह राजा नाममात्रको राजा थियो । मौका परेको बेला जङ्गलका अरू जनावरहरू पनि र्सर्वेर्सवा हुन खोज्थे । धूर्त स्याल बाघ, भालु र हात्तीमा एकआपसमा कुरा लगाएर झगडा गराउँथ्यो । ऊ मौका हेरी चापलुसी र चुक्ली लगाउँदथ्यो । ऊ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्दथ्यो । यसैले गर्दा राजा सिंह कमजोर हु“दै गएको थियो । बाघ, भालु, हात्ती राजा सिंहको कुरा मान्न तयार हु“दैनथे । उनीहरूको जङ्गल राम्रो थियो । तर एक-आपसको फुट र झैझगडाले गर्दा जङ्गलको अझ विकास गर्न सकेका थिएनन् ।
यसै जङ्गलको अलिक तल सिमसार नाम गरेको जङ्गल थियो । त्यहाँ चतुर नाम गरेको स्याल महामन्त्री थियो । त्यो जङ्गलमा पनि सिंह राजा थियो । त्यस जङ्गलमा बाघ, भालु, हात्तीहरू पनि थिए । त्यस जङ्गलमा बाघ, भालु, हात्तीहरू सिंहका कुरा मान्दथे । तिनीहरूको एक-आपसमा राम्रो मिलाप थियो । महामन्त्री चलुर स्यालको चातर्ुय र कुशलताले गर्दा राजा सिंहको कुरा सबै जनावर मान्दथे । ऊ बुद्धिमान् भएको हुनाले बेला-बेलामा सिंह राजालाई समेत अर्ती-उपदेश दिन्थ्यो । ऊ कसैप्रति नराम्रो भाव राख्दैनथ्यो । ऊ चापलुसी चुक्ली कहिल्यै गर्दैनथ्यो । ऊ सबैको भलो हुने कुरा अनि काम गर्दथ्यो । त्यो जङ्गलमा मेलमिलाप शान्ति भएको हुनाले धेरै राम्रो कामहरू हुन्थे । त्यस जङ्गलका जनावरहरू पनि असाध्यै खुसी हुन्थे ।
दर्ुभाग्यवश त्यो जङ्गलमा ठूलो बाढी आयो । अलिक होचो ठाउँ परेको हुनाले पानीले जङ्गल पूरै ढाकिदियो । ती जनावरहरू बस्ने ठाउँ कतै भएन । तिनीहरूको बिचल्ली भयो । तिनीहरूले चतुर स्यालको शरण लिन पुगे । चतुर स्यालले पनि आफ्नो बुद्धि खियायो ।
उसलाई रानीवनमा जनावरहरूको मिलाप छैन भन्ने कुरा थाहा भयो । त्यसैले ऊ सरासर रानीवनतिर गयो । रानीवनमा गएर धूर्त स्यालसँग मेलमिलाप गर्‍यो । अनि उसले स्याललाई लोभ देखायो ।
'राजा सिंह र अरू ठूला-ठूला जनावरलाई सिमसार जङ्गलमा बाढीले धेरै माछा ल्याएको छ भन्ने कुरा बताऊ न ।' चतुर स्यालले धूर्त स्याललाई भन्यो । धूर्त स्यालले पनि लालचमा परेर आफ्ना जङ्गलका ठूला-ठूला जनावरलाई सिमसार जङ्गलमा पठायो । त्यही मौका छोपेर चतुर स्यालले आफ्नो राजा सिंह र अरू सबै जनावरलाई रानीवनको जङ्गलमा ल्याएर राख्यो ।
धूर्त स्यालका राजा सिंह जब सिमसार जङ्गल पुग्यो तब मात्र थाहा पायो कि महामन्त्री स्यालले आफूलाई छलेको । एकछिनपछि त्यहाँ अरू सबै जनावरहरू आइपुगे । सबै जनावरहरूले आफूहरू ठगिएको थाहा पाए । आफूहरूमा राम्रो मेलमिलाप नभएको हुनाले धूर्त स्यालको कुराले फसाएको थाहा पाए । तर समय ढिलो भइसकेको थियो । तिनीहरूको त्यति राम्रो जङ्गलमा सिमसार जङ्गलका जनावरहरूले राज्य गरिसकेका थिए । अब उनीहरूलाई बस्ने ठाउँसम्म थिएन । पानी नै पानी भएको सिमसार जङ्गलमा तिनीहरूको बिजोक भयो । आफू-आफूबीचको फूट र झैझगडाले यो दिन देख्नुपरेको हुनाले उनीहरूले अब कहिल्यै झैझगडा नगर्ने वाचा गरे । अनि सिंह राजाले धूर्त स्यालको कपट कुराले यो गति भएकोले उसलाई सम्झाउने विचार गर्‍यो । सिंह राजाको यस कुरामा सबै जनावरले सहमति जनाए ।
धूर्त स्यालले चतुर स्यालको जङ्गलमा आश्रय पाउन सकेन । अनि ऊ आफ्नो राजा भएठाउँ आयो । त्यहाँ उसलाई सबैले भने- तिम्रै स्वार्थीपनले गर्दा आज हामीले यस्तो बिजोक सहनुपरेको छ ।'
सिंह राजाले पनि उसलाई सम्झायो-
'हेर, तिमीले गल्ती गर्‍यौ । हामीलाई झुक्याएर तिमीले आफूलाई समेत नोक्सान पुग्ने काम गर्‍यौ ।'
धूर्त स्यालले भन्यो- 'मैले त सिकारको लोभमा परेर पो यस्तो कुरा भनेको त !' तर उसले पनि यो दिन देख्नुपर्ला भन्ने कहाँ सोचेको थियो र ! स्यालले सबैको अगाडि माफी माग्यो-
'आइन्दा म कहिले पनि कपट, झूट र स्वार्थ राख्ने छैनँ ।'
जङ्गलका सबै जनावरहरूले उसलाई सुध्रने मौका दिए । उसले पनि अबदेखि चतुर स्यालले जस्तै आफ्ना राजा र अरू जनावरको लागि दिलोज्यान दिने प्रतिज्ञा गर्‍यो ।